I-China igcina inkonzo yokufezekisa kunye nearhente | Ilanga
Ngokumangalisayo ngokulula i-Shopify ukuzaliseka komyalelo kunye ne-Sunsonexpress. Sinceda abathengisi bakwaShopify bazalisekise iiodolo ngokukhawuleza nangeendleko ezifanelekileyo ukuhlangabezana nokulindelweyo ngabathengi babo.
Ivenkile yenza ngokudibeneyo ngaphandle kwesoftware yethu ukuzalisekisa ukuzaliseka kunye nolawulo lwempahla, ikuvumela ukuba ugxile ekuthengiseni nasekukhuliseni ishishini lakho- ungakhathazeki ngokuzaliseka kwe-odolo.
Qhagamshela ivenkile yakho yakwaShopify kwiSoftware yokufezekisa iSepsonexpress ngamanyathelo nje ambalwa alula.
Qhagamshela ivenkile yakho ngonqakrazo lweqhosha, emva koko ungenise iiodolo zakho kwimizuzwana. Umsebenzi wokubuyela umva sele wenzelwe wena, ke kulula ukuba uqalise ngaphandle kwesidingo somphuhlisi ngokudibanisa kwethu okulula kwe-API.
Ukuzaliseka komyalelo ozenzekelayo
Nje ukuba iodolo ibekwe kwivenkile yakho yakwaShopify, ithunyelwa ngokuzenzekelayo kwi-Sunsonexpress, apho iyakuthathwa khona, ipakishwe, ize ithunyelwe kwiziko lethu lokuzinikela.
Ungayilandela inkqubo yokufezekisa iodolo kwideshibhodi yakho ye-Sunsonexpress-ukusuka ekuthengweni kwabathengi ukuya kuthi ga ekuzisweni.
Ivenkile yokuThengisa ngokukhawuleza
Abathengi bakho balindele ukuhambisa ngokukhawuleza, okufikelelekayo xa bathenga kwi-Intanethi.
Unokukhetha i-Sunsonexpress, ikunike ngeendlela ezahlukeneyo zokukhetha amaxabiso kunye nesantya sokuhambisa esifezekisa iimfuno zakho ezithile.
Imiyalelo efunyenwe ngaphambi kwentsimbi yesine emva kwexesha laseBeijing iya kuthathwa ize ithunyelwe kwangolo suku!
Ngokukhawuleza uku-odola kuthumela, ulwazi lokulandela umkhondo luye lwatyhalelwa ngokuzenzekelayo lubuyela kwivenkile yakho yakwaShopify kwaye ithunyelwe kubathengi bakho.
Uluhlu lolawulo lwempahla yeShopify
Landa umkhondo wobungakanani besitokhwe onaso kumaziko ethu okufezekisa usebenzisa inkqubo yolawulo lokugcina. Zonke iinkcukacha zikwixesha lokwenyani kwaye zikuvumela ukuba uphinde u-odole isitokhwe xa kufuneka kubathengisi bakho baseTshayina.
China Ukuzaliseka kweShishini
Inkonzo yokuZalisekiswa kweNdawo yokugcina yaseTshayina kubaThengisi beShishini
Ivenkile yokufezekisa ukuzaliseka
Ivenkile yokuFezekisa iNkonzo kunye nokuHanjiswa kweNkonzo yoGcino lwaSimahla
Ivenkile yokuThengiswa kweeNkonzo zokuZalisekisa eFrance
Ivenkile yokuThengiswa kweeNkonzo zokuFezekisa eJamani
Ivenkile yokuThengiswa kweeNkonzo zokuZalisekisa
Ivenkile yokuThengiswa kweeNkonzo zokuZalisekisa kuthi
Thenga ukuzalisekiswa komyalelo
Ivenkile yokufezekiswa kweShenzhen
Ivenkile yokuThumela kunye neNkonzo yokuZalisekisa iChina kwihlabathi liphela
Ukuhambisa ngenqanawa ukusuka eTshayina ukuzalisekiswa kokugcina izindlu ukuya eUsa
Ivenkile ukuzalisekiswa kwendlu yokugcina impahla